Somali - BBC News Somali_淘
Senisyahan u dhashay Shiinaha ayaa labo dal oo ka tirsan quwadaha waaweyn ee caalamka ka caawiyay inay tegaan dayaxa balse waxaa lagu xusuustaa mid kamid ah dalalkan, sida ay ku warrameyso Kavita Puri.
TOOS Faransiiska: “Dagaalka ka dhanka ah Islaamka wuxuu sababi karaa weerarro hor leh oo dhaca”
Ku soo dhowaada tebinta tooska
Mid ka mid ah hoggaamiyayaasha bulshooyinka Muslimiinta eek u nool dalka Faransiiska Idriss Sihamedi, ayaa dalka Turkiga eydiistay magangalyo siyaasaadeed ka dib markii dowladda Faransiiska ay xirtay hay'ad islaami ah oo uu hoggaaminayay.
President Recep Tayyip Erdogan: Ninka siyaasadda Turkiga heystay tan iyo sanadkii 2002-dii.
Miché Solomon, iyadoo 17 jir ah ayey ogaatay inay leedahay labo hooyo - mid sax ah iyo mid been ah.
In badan oo kamid ah warbaahinta kasoo baxa dalalka Carabta ayaa si weyn u tebiyay xuska maalintii uu dhashay Nebiga taas oo kusoo beegantay xilli dunida muslimka ay ka socdaan dibadbaxyo looga soo horjeedo hadalkii kasoo baxay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
Doon sidday 200 oo ruux ayaa Sabtidii ku gubatay kaddibna ku quustay badda, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Pogba ayaa ka sheekeeyay sidii uu diinta Islaamka ku galay.
Labo jeer ayey horay u dagaallameen Masar iyo Itoobiya, waxayna guusha raacday Itoobiya.
Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 30 Oktoobar 2020
Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 30 Oktoobar 2020
Dunida Iyo Maanta, 16:59, 29 Oktoobar 2020
Xiga Dunida Iyo Maanta, 16:59, 30 Oktoobar 2020
Waa kuma Macron, Madaxweynaha malaayiinta Muslimiinta ah ka careysiiyay?
Waxa uu madaxwayne ka noqday dalka Faransiiska Emmanuel Macron bishii May 2017-kii.
Sida ay Muslimiinta isugu khilaafsan yihiin xuska dhalashada Nebiga
Meelo badan oo ka tirsan dunida muslimka waxaa sanad kasta lagu qabtaa munaasabado lagu xusayo maalintii uu dhashay Nebi Maxamed N.N.K.H.H.
Xog ku saabsan bulshada Muslimiinta ee Faransiiska
Macluumad la xiriira bulshada Muslimiinta ee ku nool dalka Faransiiska.
Isbahaysiga milatari ee NATO waxaa ku jira 30 waddan oo madax bannaan, dalalkaasna waxaa ka mid ah Turkiga iyo Faransiiska oo hadda ay xiisad ba'an ka dhaxeyso.
Khilaafka biyo-xireenka: Sida Trump "u khiyaamay" Itoobiya
Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore weriyayaasha Aqalka Cad u ugu sheegay "Waa xaalad aad u halis badan sababtoo ah Masar sidaas ugama samri karto arrinta."
"In Nabiga sharaftiisa wax laga sheego waa duullaan cad oo lagu soo qaaday diinta Islaamka"
Culimada Soomaaliyeed ayaa si weyn caro uga muujiyay hadalka madaxweyana Faransiiska Emmanuela Macron kaddib dhacdadii lagu dilay macalinkii u dhashay dalkaas oo ardeydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyay Nebi Maxamed.